Mota Inobhadharwa Inogona Kudzoserwa Kune Anotengesa? Zvese pano - Zvinyorwa
yangu ipad 2 haizobatanidze kune wifi
chii chinogona kukonzera kufamba mudumbu rako
sei kubatanidza ipad yangu kune internet
kukosha kweiyo nhamba 5
iphone inoti hapana verizon yebasa
Unogona kudzosa mota ichangotengwa? . Ndiri kuda kuchinja mota yangu kuti iite imwe. Munhu wese anokanganisa. Kutenga mota sarudzo hombe, uye zvakakosha nyatso kufunga nezvekudyara kwako . Kana iwe wakatenga mota panguva iyoyo kana uine shanduko huru mumamiriro ezvinhu Mushure mekunge mawana mota, unogona kunge uchifunga zvekare nezvekutenga kwako. Kana ukademba sarudzo yako, unogona kudzosera mota kumutengesi . Kana mota iine akakosha michina matambudziko, inogonawo kunge iri kodzero yako kuidzosera .
Unogona kudzosa mota ichangotengwa?
Ndinogona kuchinjanisa mota yangu nyowani neimwe? Kana iwe wakatenga mota nguva pfupi yadarika, unogona kuidzosera kumutengesi. Zvisinei, zvinoenderana nemutengesi. Tarisa uone kana mutengesi ane return policy . Kana zvikadaro, tevera iyo mazwi ekudzoka mutemo paunodzosera mota. Kana mutengesi asina mutemo wekudzoka, zvino zviri kwavari kuti vanobvuma kudzoka here kana kuti kwete.
Tanga nekubata munhu wawakashanda naye pawakatenga mota. Tsanangura zvaunoda kudzorera mota. Ungatofanira kudaro taura nemaneja kana muridzi wevatengesi . Gadzira yako kesi uye uone kana ivo vachizogamuchira kudzoka. Kana uchikwanisa kutenga mota yakachipa, taura navo nezve chinja kumotokari yakachipa . Vanogona kushanda newe sezvo vacharamba vachitenga mota pamabhuku.
Kana iwe ukachinjisa mota pawakatenga yako mota, pamwe haugone kuidzosera. Shanduko dzinowanzo kutengeswa kumisheni, uye izvo zvinogona kunge zvakaitika panguva yaunodzosera mota nyowani.
Iyo mandimu mitemo chengetedza vatengi vanotenga mota ine hurema hwakakura . Kana mota yako isina kukwana, nhanho yekutanga ndeyekuonana nemutengesi. Vachaedza kugadzirisa mota. Zvichienderana nemitemo iri mudunhu rako, vangangoda kugadziridzwa imwe kana dzimwe nguva tisati tasungirwa kuchitsiva kana kukupa mari . Dambudziko nemota rinofanirawo kuva zvakakosha . Dambudziko diki, senge rakaputswa gonhi mubato, haizove chikonzero chekutsiva kana kudzorera pasi pemutemo wemoni.
Kana mutengesi asingadi kubvuma kudzoka uye mota yakapihwa mari , une sarudzo shoma. Imwe ndeye kugadzira nokuzvidira kutsiva mota . Izvi zvinoreva kuti unodzorera mota kukambani yaiibhadharira mari . Iyo yemari kambani ndichatengesa mota pafandesi . Kana iyo mari iyo mota yatengeswa iri pasi peyako chikwereti, iwe uchave nemhosva yemusiyano . Uye zvakare, mukweretesi anozotaurira zvakare kudzoserwa kumahofisi echikwereti, uye izvi ichave nemhedzisiro yakaipa pachikwereti chako uye nhoroondo yako yechikwereti .
Unogona zvakare kutengesa mota . Zvisinei, zvakati omei kutengesa mota nechikwereti chakakosha. Usati waenderera mberi, bata wako waakakweretesa kuti uone kana paine matanho chaiwo aunofanira kutora . Zvinogona kuve zvakaoma kutengesa mota isina zita rakajeka, asi iwe unogona kuwana mutengi anoda kushanda newe. Kunyange zvakadaro, mota nyowani dzinodzikira nekukurumidza , saka zvinogona kunetsa kutengesa mota nemari yakakwana kuvhara chikwereti chemari .
Kudzosera yakashandiswa mota mukati memazuva makumi matatu
Kazhinji, zvekutengesa zvine mutemo wekudzoka zvinokutendera iwe kudzosera yakashandiswa mota mukati memazuva makumi matatu . Nekudaro, havazi vese vagovera vanozove neyakafa nguva yakatarwa yekudzoka. Semuenzaniso, Val-U-Line® ine Kwete Mibvunzo Yakabvunzwa Kudzoka Policy iyo inokutendera iwe kudzosera mota yakashandiswa yawakatenga kubva kwatiri mukati memazuva matatu kana mazana mazana matatu.
Vamwe vanogona kupa yakareba kana ipfupi yakashandiswa mota kudzoka nguva. Zvakare, vamwe vangangotopa mutemo zvachose. Naizvozvo, kana iwe uchitsvaga yakamboshandiswa mota, zvakanakisa kutarisa kune wako wemuno mutengesi kuti uwane rumwe ruzivo nezve mazwi ekudzosera mota yako, kana iripo.
Maitiro ekudzosera yakashandiswa mota kune wako wemunharaunda mutengesi
Kana iwe ukatenga mota kubva kunzvimbo inopa kudzoka, maitiro ekudzosa kana kuchinjana mota yako ari nyore. Zvisinei, pane zvinhu zvishoma zvekuziva usati wadzokera kune mutengesi.
Semuenzaniso, zvakakosha kuve nechokwadi kuti une zvese zvinyorwa zvakapihwa kubva panguva yekutanga iwe yawakatenga mota yako yawakamboshandisa. Kuve nemagwaro ako paruoko kana wagadzirira kudzoka kunoita kuti maitiro acho akurumidze uye kunyange nyore.
Iwe unofanirwa zvakare kutora nguva yekuona kuti mota yako iri mune yakanaka mamiriro vasati vadzoka. Kana paine chivara, kupenga kana kukwenya pamotokari yako yanga isipo pawakaitenga, izano rakanaka kuti igadziriswe kudzivirira matambudziko angangoitika panguva yekudzoka.
Chekupedzisira, kana iwe uine chero mibvunzo nezve nzira yekudzosera yakamboshandiswa mota kumutengesi, usazeze kubvunza. Kunyangwe iwe uchifarira kutsvaga izvo zvaunoda kuti udzokere kana uchida kutora imwe mota yekuyedza drive.
Matipi ekudzosera mota yakamboshandiswa
Nepo mashandisiro anoita mota kudzoka ari nyore, pane matipi mashoma ekuchengeta mupfungwa kuita kuti ruzivo rwako ruve nyore uye nyore. Aya ndiwo mamwe emazano akakosha ekuchengeta mundangariro:
1. Uya nemapepa ako. Paunoenda kunodzosera mota yako yawakashandisa kumutengesi, ita shuwa kuti une zvese zvinyorwa kubva pawakazvitenga. Izvi zvichaita kuti kuburitsa ruzivo rwako uye maitiro ekudzoka.
2. Iva nechokwadi chekuti motokari iri mumamiriro akanaka. Kuti uwane kudzoka, mota inofanirwa kunge iri muchimiro chakafanana chawakatenga. Kana iyo yakamenywa kana kukwenywa kana kana iyo yemukati yakasvibiswa kubva pawakatenga, ndapota gadzirisa iyo nyaya usati wadzorera.
3.Funga nezvekuchinjana. Hazvina mhosva kuti nei wafunga kudzosera mota yako yawakashandisa kumutengesi, inogara iri zano rakanaka kutarisa zvinyorwa zvemutengesi. Kana paine imwe mota yakanakira iwe, unogona kukwanisa kudzosa kudzoka senge kuchinjana. Mune ino mamiriro, iwe uchave unokwanisa kutyaira kumba mumotokari iyo yakakunakira iwe. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kubhadhara mutsauko kana zvichidikanwa.
State mitemo yemononi inodzivirira vatengi kubva pamhedzisiro yekutenga mota ine hombe michina matambudziko. Bata hofisi yako yegweta guru rehurumende kuti uwane ruzivo pamusoro pemitemo yemarimu inoshanda mudunhu rako.
Chrysler inopa vatengi sarudzo yemazuva makumi matanhatu-isina njodzi. Pakati pemazuva makumi matanhatu ekutanga mushure mekutenga akawanda Chrysler mota, vatengi vanogona kudzorera mota kumutengesi. Mutengi haazogashirwazve rezenisi, zita, kunyoreswa, mitero, inishuwarenzi, mari dzevatengesi, mawaranti akawedzerwa, mari yemari, uye kusaenzana kwakashata mumotokari. Pamusoro pezvo, vatengi vanofanirwa kubhadhara masenti makumi mana paira mamaira imwe neimwe inotungamirwa kusvika pamazana mana emakiromita anotenderwa. Mota dzakadzorerwa hadzigone kudarika madhora mazana maviri ekukuvara.
Investopedia: Sarudzo dzeKana Iwe Usisakwanise Kubhadhara Imota Yako
NOLO: Handikwanise kubhadhara mari yangu yemotokari. Ndinogona kudzorera mota kubhangi?
Edmunds: Unogona kudzosera mota yawakangotenga here?
Credit.com: Mota yangu nyowani chidimbu chejunk. Ndinogona kuidzosera kumutengesi here?
NOLO: Mutsva Mota Lemon Mutemo
Salvage zita rinogona kunyoreswa zviri pamutemo
Zvinodhura zvakadii kunyoresa mota mu NY?